Kooxda Manchester City oo bayaan ka soo haartay qalliinkii lagu sameeyey daafaceeda Aymeric Laporte – Gool FM
(Manchester) 04 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xaqiijisay in ciyaaryahankeeda Aymeric Laporte qalliin lagu guuleystay looga sameeyey jilibka.
Daafaca reer France ayaa laga dhex-qaaday garoonka qeybtii hore kulankii ay kooxdiisa Man City Sabtidii guusha kaga gaartay garoonkeeda Etihad naadiga Brighton, kaddib markii uu jilaafo adag kala kulmay daafaca kooxda martida ahayd ee Adam Webster.
Ciyaaryahanka ayaa u safray magaalada Barcelona ee dalka Spain si dhaawacaas looga soo daweeyo, waxaana kooxdiisa Man City ay maanta xaqiijisay in qalliin looga sameeyey daafacaas dhanka jilibka lagu guuleystay.
“Aymeric Laporte ayaa qalliin looga sameeyay jilibka kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray carjawda intii lagu guda jiray ciyaartii Sabtidii aan ka badinay Brighton.” ayaa lagu bilaabay bayaanka ka soo baxay kooxda Man City.
“Qalliinka oo uu Dr. Ramon Cugat ku sameeyay Magaalada Barcelona, waa lagu guuleystay oo saadaal dheeraad ah ayaa la bixin doonaa waqtiga loogu talagalay ee uu laacibku maqnaan doono.”
“Qof walba oo City jooga wuxuu u rajeynayaa Aymeric soo kabasho buuxda oo deg deg ah.”